NCS FAQ हरूको युवा र आमाबाबु / अभिभावकहरूको लागि - तत्व सोसायटी
म एक प्याकिङ सूची कहाँ पाउन सक्छु?
मेरो कार्यक्रम कहाँ हुन्छ?
के म साथीहरुसँग NCS मा साइन अप गर्न सक्छु?
के मोबाइल फोन NCS मा अनुमति दिइएको छ?
के जवानहरूले एक सुत्ने बैग ल्याउन आवश्यक छ?
कुन खानाहरू प्रदान गरिन्छ?
प्याकिङ्ग सूची NCS ग्रीष्म / शरद ऋतु गाइडमा समावेश छ जुन हामी जवान मान्छे र तिनीहरूका आमाबाबु / अभिभावकहरूलाई पुष्टि गरिएका स्थानहरूमा पठाउँछौं। कार्यक्रमको सुरुवात अघि हामी लगभग एक महिना अघि पठाउछौं।
यदि तपाइँले तपाइँको NCS ग्रीष्म / शरद गाइडलाई अझै प्राप्त गर्नुभएको छैन भने, तपाइँले तल रहेको लिङ्कमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ जुन अनलाइन संस्करण हेर्नका लागि प्याकिङ सूची समावेश गर्दछ।
NCS ग्रीष्मकालीन 2017 गाइड
तपाईसँग एक सूटकेस र एक दिनको सामान ल्याउन अनुमति छ। कुनै पनि अतिरिक्त थोरै पछाडि राख्नु पर्नेछ, त्यसैले कृपया सामान सीमा भित्र रहनुहोस्। सीमित सामान स्पेसको कारणले गर्दा ठूलो सूटकेस प्रयोग गर्नबाट बच्न प्रयास गर्नुहोस्।
युवा मान्छेले कुनै पनि निषिद्ध वस्तुहरू जस्तै शराब, कुनै पनि अवैध ड्रग्स, अवैध वस्तुहरू, पेन्कोभाइ वा हतियारहरू NCS मा ल्याउँदैन। हामी जवान व्यक्तिहरूलाई यी नियमहरूको आदर गर्न चाहन्छौं किनकि त्यहाँ यी वस्तुहरूको स्वामित्वमा पाईने परिणामहरू हुनेछ।
कृपया ध्यान दिनुहोस् कि हामी व्यक्तिगत सामानहरू बीमा गर्न सक्षम छौं। यस कारणको लागि, हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाई अनावश्यक महंगी वस्तुहरू वा मूल्यवान वस्तुहरू ल्याउनुहुन्न।
प्रत्येक NCS कार्यक्रम ब्रिटेन भित्र भित्र हुन्छ।
अघिल्लो वर्षहरूमा, युवाहरू यस कार्यक्रमको चरण 1 को लागि स्कटल्याण्ड, कम्ब्रिया, केन्ट र वेल्स जस्ता स्थानहरूमा यात्रा गरेका छन्।
चरणहरू2र3प्रायः जवान व्यक्तिको स्थानीय क्षेत्रमा नजिक हुन्छन्, प्राय: यात्राको यात्रा भित्र उनीहरूको घर वा विद्यालयबाट, तर यो भिन्न हुन्छ र युवाहरू घरबाट थप हुन सक्छन्।
हामी सबै कार्यक्रमहरू निश्चित रूपमा एकपटक प्रत्येक कार्यक्रमको सुरूवात मिति लगभग एक महिना अघि सटीक स्थानहरूको बारे थप जानकारीको साथ टाइमटेबल पठाउनेछ।
सहभागीहरू एक बैठकको बिन्दुमा यात्रा गर्नु आवश्यक छ जुन प्रायः स्थानीय क्षेत्र भित्र भित्र वा नजिकै छ। त्यसपछि हामी यात्राको व्यवस्था गर्नेछौं कि जवान मान्छेलाई कुनै स्थानमा अझ बढि स्थानमा लिनुहोस्। युवा मान्छे र तिनीहरूका आमाबाबु वा अभिभावक बैठकका बिन्दुहरूको यात्रा र उनीहरूको समय तालिकामा देखाइएको समयमा फिर्तीबिन्दुहरूको यात्रा व्यवस्थित गर्नको लागि जिम्मेवार छन्।
युवा मान्छे साथीहरु संग साइन अप गर्न सक्छन्, र यदि उनि एक नै क्षेत्र मा त्यहि तिथि को लागी आवेदन गर्छन र त्यहि चरण2कौशल को चयन गर्नुहोस, उनको एक नै कार्यक्रम मा होने को एक राम्रो मौका छ। एकपटक उनीहरूले साइन अप गरे पछि, जवानहरूले हामीलाई एकै कार्यक्रममा सोध्न वा कोठामा सोध्न सम्पर्क गर्न सक्छन्। हामीले प्रत्येक मित्रको नाम जान्नुपर्छ र हामी त्यसोभए यो हामी सबैलाई ध्यान दिनेछौं। यद्यपि हामी यो ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौं, चाँडै साइन अप गर्नाले उनीहरूको मौका बढ्नेछ!
NCS नयाँ व्यक्तिहरू भेट्न र नयाँ साथीहरू बनाउनको लागि एक राम्रो तरिका हो! यहाँ हाम्रो भिडियो जाँच गर्नुहोस्।
धेरै युवाहरूले पत्ता लगाउँछन् कि उनी विभिन्न साथीमा वा उनीहरूको मित्रहरूबाट लुकेको छ भने, कार्यक्रमले टोली निर्माण गतिविधिहरूमार्फत नयाँ व्यक्तिलाई भेट्न र उनीहरूको वरिष्ठ सल्लाहकारले उनीहरूलाई अनिश्चित हुँदा दुबाराको लागि एक ठूलो व्यक्ति हो। हामी केवल प्रत्येक कार्यक्रममा कुनै पनि विद्यालयबाट जवान व्यक्तिहरूलाई अनुमति दिन्छौं, र त्यसैले कार्यक्रम पहिलो पटक धेरै युवाहरू एकअर्कालाई भेट्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा, र विशेष गरी शुरुमा, त्यहाँ धेरै टोली गेमहरू र हिमवर्तकहरू हुनेछन् जसले सबैलाई उनीहरूको टोलीमा अन्य युवा व्यक्तिलाई जान्छ।
यसको अतिरिक्त, धेरै युवा मान्छे भन्छन् कि NCS कार्यक्रमको सबैभन्दा राम्रो भाग मध्ये एक धेरै धेरै नयाँ मान्छे भेट्न र नयाँ साथीहरू भेटिए। हाम्रा केही अघिल्लो सहभागिताको अनुभव हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। हामी जानकारी प्रदान गर्न सक्षम छैन कुन जवान जवानहरू मा राखिनेछ, किनकि प्रत्येक कार्यक्रमको लागि टोली कार्यक्रम सुरु मिति भन्दा दुई पटक मात्र आवंटित गरिन्छ। युवा व्यक्तिहरूले पत्ता लगाउँछन् कि तिनीहरू कुन कार्यक्रमको पहिलो दिनमा छन्।
कृपया ध्यान दिनुहोस् कि NCS को आवास एकल लिंग हो र यसैले हामी विभिन्न लिंगका युवाहरूको लागि कोठा साझेदारी अनुरोध स्वीकृत गर्न सक्दैनौं।
के मोबाइल फोनहरू NCS कार्यक्रममा अनुमति दिइएको छ?
युवा मान्छेलाई एनसेएस कार्यक्रममा उनीहरूको मोबाइल फोनहरू (र चार्जरहरू) ल्याउन अनुमति दिइएको छ र क्रियाकलाप नगर्दा उनीहरूको प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछन् (गतिविधि समय समयमा मोबाइल फोन प्रयोग गर्न अनुमति छैन)। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि सधैं सँधै मोबाइल फोन रिसेप्शन नहुन सक्छ, विशेष गरी चरण 1 को समयमा जुन सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रमा आधारित छ।
हाम्रो सबै आवास आवश्यक सुविधाहरु संग आउछ, जस्तै पावर सकेट, वर्षा, आदि को उपयोग को लागी उनको विशेष कार्यक्रम मा आवास को प्रकार को बावजूद, प्रतिभागिहरु लाई पावर स्याकेट सम्म पहुंच र यसैले आफ्नो फोन चार्ज गर्न मा सक्षम हुनु पर्छ। टेन्ट आवासको लागि पहुँच धेरै सीमित हुन सक्छ।
कृपया ध्यान दिनुहोस् कि हामी व्यक्तिगत सामानको बीमा गर्न सक्षम छैनौं त्यसैले त्यसो कि जवान मान्छे जसले आफ्नो मोबाइल फोन ल्याउन सक्दछन् त्यस्ता जोखिममा।
होइन, जवानहरूले एक सुत्ने बैग ल्याउन आवश्यक छैन। हाम्रो सबै आवास टेस्ट आवास र दर्स सहित बिस्तर सहित, हुन्छ। हामी रातभरको शिविरको लागि बिडिंग प्रदान गर्दछौं जुन जवान मान्छे भाग 1 को समयमा भाग लिन्छन्।
सबै खाना र पेय कार्यक्रम को आवासीय भागहरु को समयमा प्रदान गरिनेछ (जब जवान मान्छे घर देखि दूर रहछन)। तपाईं केवल चरण 1 को पहिलो दिन (र कार्यक्रमहरूमा निर्भर चरण2को लागि पैक गरिएको लंच ल्याउन आवश्यक छ, कृपया आफ्नो टाइमसेट योग्य जाँच गर्नुहोस्)।
जबसम्म हामी जवान व्यक्तिको आवश्यकताको बारेमा अघि बढि जान्छौं, हामी आहार, कोसर, शाकाहारी, तरकारी, र ग्लुटेन-फ्रि खाना सहित विभिन्न आहार एलर्जी सहित आहारको लागि सबैभन्दा विशेष खाना प्रदान गर्न सक्छौं। यहाँ आवासीय भागहरूमा उपलब्ध भोजनहरूको उदाहरणहरू छन्। विकल्प फरक हुनेछ:
गर्मीको कार्यक्रमका लागि
कृपया पहिलो दिनको लागि प्याड लंच ल्याउनुहोस्। त्यसपछि उच्च ऊर्जा खाना आउटडोर गतिविधि केन्द्र द्वारा प्रदान गरिएको छ।
नाश्ता: अनाज, पकाएको नाश्ता, पुष्प
लंच: स्यान्डविच, क्रिसपीस, फल
खानेकुरा: तातो खाना (जस्तै पास्ता, पिज्जा, करी, मिर्च), सलाद, मिठाई
तपाईंको पहिलो तालिका जाँच गर्न को लागी कि यदि तपाईंलाई पहिलो दिनको लागि प्याड लंच ल्याउन आवश्यक छ। त्यसपछि भोजन द्वारा चुनौती प्रदान गरिएको छ र युवाहरू सामान्यतया आफैले स्वतन्त्र जीवन बिताउने अनुभवको रूपमा खाना पकाउनु हुनेछ।
खानेकुरा: हट भोजन को चयन र एक दल को रूप मा पकाया (उदाहरणीय सॉसेज र मासुश आलु, हलचल-फ्राइ, पिज्जा)
चरण3(आवासीय)
कृपया आफ्नो प्याच लंच ल्याउनुहोस्। खाना प्रदान गरिएको छैन।
शरद कार्यक्रमहरूको लागि
चरणहरू2र3(क्रियाकलाप दिन, रातमा घरमा बस्दै)
आमाबाबु र गौरीहरू
युवाहरू आवासीय चरणहरूमा कहाँ सुन्नेछन्?
जानकारी साँझमा के हुन्छ?
एनसीएसमा भाग लिन कत्तिको खर्च हुन्छ?
के कार्यक्रममा जाने केही युवाहरू चुनौतीपूर्ण व्यवहार छन्?
जमीनमा जवान मानिसहरूलाई कसले जिम्मेवार बनाउनेछ?
के NCS मा भाग लिने मेरो किशोर अध्ययनको साथ हस्तक्षेप गर्नेछ?
म कसरी मेरो किशोरमा संलग्न हुन सक्छु?
NCS को समयमा उपलब्ध आवास व्यवस्थाहरू छनौटहरू छन् (उदाहरणका लागि अलग शल्यस्थल कोठाहरू, तम्बूहरू, वरिपरिहरू, र यति), र विशिष्ट आवास कार्यक्रमले भिन्न हुनेछ। प्रत्येक कार्यक्रमको लागि आवास र स्थानहरूको विवरण कार्यक्रम सुरुवात मिति लगभग एक महिना भन्दा सहभागीहरूलाई पठाइने छ।
आवास एक भित्री आउटडोर गतिविधि केन्द्र, विश्वविद्यालय परिसर वा अन्य आवास प्रदायक द्वारा बनाए राखिएको छ र त्यहाँका सुरक्षा सुविधाहरू रहेका छन् जसका बासिन्दाहरूले सम्भवतः सम्भवतया सुरक्षित रूपमा राख्न सकेन। पुरुष र महिला सहभागिता एकल लिङ्ग हाउसमा विभाजित छन् र प्रत्येक अन्य कोठामा प्रवेश गर्न अनुमति छैन।
आवास आवश्यक सुविधाहरु संग वर्षा जस्तै र पावर स्याकेट को उपयोग गर्दछ। बाथरूम सहित केही आवास, अन्य जवान मान्छेसँग साझा हुन सक्छ तर यो केवल एकै लिंगको सहभागी हुनेछ।
यद्यपि त्यहाँ कुनै सेट समय छैन जुन जवानहरूलाई सुतिरहेको हुनुपर्छ, सबै जवानहरू 10.45pm द्वारा आफ्नै आवासमा हुनुपर्दछ। हामी सिफारिस गर्दछौं कि जवानहरूले राम्रो रातको सुत्न पाउने सुनिश्चित गर्नका लागि तिनीहरू पूर्णतया अर्को दिनका गतिविधिहरूको आनन्द उठाउँछन्!
ग्रीष्मको छुटका क्रममा सुरू गर्ने कार्यक्रमहरूको लागि:
चरण 1 को समयमा, युवाहरु ग्रामीण इलाकों मा एक आउटडोर गतिविधि केन्द्र मा रहन। आवासको प्रकार भिन्न हुन सक्छ। यो रातभरको डेरा यात्रा यात्राको साथमा छात्रावास हुन सक्छ, तर यो पनि तम्बू वा गाई हुन सक्छ। प्रत्येक कार्यक्रमको विवरण सुरु हुने मिति भन्दा लगभग एक महिना भन्दा सहभागितामा पठाइने छ।
चरण2को समयमा, युवाहरूले घरबाट बसिरहेका र आफ्नै खाना पकाएर स्वतन्त्र जीवनको अनुभव गर्नेछन्। फेरि, आवास व्यवस्थाहरू फरक हुन सक्छ (उदाहरणका लागि, यो विश्वविद्यालय शैली आवास वा तम्बू हुन सक्छ), र कार्यक्रम सुरु मिति भन्दा करिब एक महिना भन्दा प्रत्येक कार्यक्रमका लागि विवरण प्रतिभागिहरूलाई पठाइने छ। चरण3को समयमा, प्रत्येक रात जवान मानिसहरू घरमै रहनेछन्।
आधे-अवधिको समयमा सुरू गर्ने प्रोग्रामहरूको लागि:
चरण 1 को समयमा, युवाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा एक आउटडोर गतिविधि केन्द्रमा रहनेछन्। आवासको प्रकार भिन्न हुन सक्छ। यो रातभरको डेरामा यात्राको साथमा छात्रावास हुन सक्छ, वा यो वरिपरि (वरपर टेंट्स), वा टेन्ट हाउस हुन सक्छ। प्रत्येक कार्यक्रमको विवरण सुरु हुने मिति भन्दा लगभग एक महिना भन्दा सहभागितामा पठाइने छ। सबै आवश्यक सुविधाहरु, जस्तै वर्षा र पावर स्याकेटहरू उपलब्ध हुनेछन्। बाँकी कार्यक्रम (चरण2र 3) को समयमा, युवाहरू हरेक रात घरमै बस्नेछन्।
सूचना शाम को सहभागीहरु र अभिभावक या अभिभावकहरुको लागि एनसीएस को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्न को लागी एक अवसर हो र उनि प्रोग्राम को बारे मा कुनै प्रश्न पूछें। यो उनीहरूको लागि पनि एक कार्यक्रममा भाग लिने अन्य युवा मान्छे र तिनीहरूका आमाबाबु वा अभिभावकहरू भेट्नको लागि पनि अवसर हो।
हामी तपाईंलाई जानकारी शाम को लागि एक निमन्त्रणा पठाउनेछ जब स्थल पुष्टि हुन्छ। यो सामान्यतया2हप्तामा कार्यक्रम सुरु हुनु अघि राखिएको छ। हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाइँ सहभागी पार्टनरहरूको रूपमा यो धेरै उपयोगी पाएको छ, यो यद्यपि यो अनिवार्य छैन। कुनै पनि अवस्थामा, हामी तपाईंलाई सुरुवात कार्यक्रममा ई-मेल वा पोस्ट द्वारा लगभग एक महिना अघि एक विस्तृत समर / शरद ऋतु गाइड पठाउनेछौं, सामान्यतया अनुप्रयोगमा चयन गरिएको प्राथमिकतामा निर्भर गर्दछ।
हामी विश्वास गर्छौं कि सबै पात्र 15-17 वर्षहरू NCS मा भाग लिन योग्य छन् र यो पैसाको लागि उत्कृष्ट मूल्य हो। सरकार प्रति सहभागी £ 1,000 भन्दा बढी प्रतिज्ञा गर्दछ ताकि हामी यो सुनिश्चित गर्न सक्दछ कि यो कार्यक्रम तपाइँले £ 50 प्रशासन शुल्क भन्दा बढी खर्च गर्नुहुन्न, चाहे तपाई NCS चुनौती वा NCS ट्रस्ट मार्फत आवेदन गर्नुहुन्छ। सहभागीहरू घरबाट टाढै बितेका सबै क्रियाकलापहरूसँग बिताउँछन्। यसमा आवास, खाना (आवासीय चरणमा हुँदा) र उपकरण समावेश गर्दछ।
हामी अक्सर भ्रमण गर्ने स्कूलहरूको लागि विशेष प्रस्तावहरू प्रदान गर्छौं। यदि तपाइँसँग वित्तीय सहायता वा भुक्तानी सम्बन्धी कुनै प्रश्नहरू छन् भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
चुनौतीले उनहरूलाई चुनौतीपूर्ण व्यवहारको साथ सहयोग पुर्याउनका लागि तिनीहरूलाई भाग लिन अनुमति दिईयो र NCS बाट उत्कृष्ट प्राप्त गर्न।
सुरक्षाको रूपमा हाम्रो मुख्य चासो हो, हामी प्रत्येक युवा व्यक्तिको आवेदनको समीक्षा गर्दछौं, विशेष गरी प्रदान गरिएको चिकित्सा र समर्थन जानकारीमा।
यदि हामी भनिएको छ कि एक जवान व्यक्तिले निम्न स्पष्ट नियम र सीमाहरूसँग कठिनाइ गरेको छ भने, हामी यो छलफल गर्न आमाबाबु वा संरक्षकलाई सम्पर्क गर्नेछौं। केही अवस्थामा हामी थप जानकारीको लागि स्कूल, प्रोफेसर वा अन्य विशेषज्ञहरूलाई सम्पर्क गर्नेछौं। त्यसपछि हामी जवान व्यक्तिको बारेमा निर्णय र एनसीएसमा उनीहरूलाई कति सहयोग पुर्याउन सक्छौ। यदि आवश्यक छ भने, हामी जवान व्यक्तिको लागि अतिरिक्त कर्मचारी सहयोग पुर्याउनेछौं।
सबै अवस्थामा, हामी सान्दर्भिक कर्मचारीलाई कुनै पनि चुनौतीपूर्ण व्यवहारको बारेमा जानकारी गराउनेछौं ताकि तिनीहरू जवान व्यक्ति र सम्पूर्ण टोलीलाई समर्थन गर्न सक्दछ। हामीसँग पनि आचार संहिता पनि छ। हामी यो कार्यक्रम को शुरुवात मा युवा मान्छे को व्याख्या गर्दछन र हामी उनलाई उनको पालन गर्न को अपेक्षा गर्छन। आचरणको कोडमा हामीले कार्यक्रममा अपेक्षा गर्ने व्यवहार बारे केही नियमहरू समावेश गर्दछौं, सुरक्षा नियम, कानून, र सम्मान र अरू व्यक्तिहरू सहित।
यदि एक जवान व्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक वा लगातार कोड आचरण तोड्ने हो, कर्मचारीले स्थितिको आकलन गर्नेछ र सबै भन्दा उपयुक्त क्रियाकलापको निर्णय गर्नेछ। केही अवस्थामा, हामी जवान व्यक्तिलाई कार्यक्रम छोड्न सक्छौं।
सहभागीहरूको सुरक्षा र भलाई मान्य हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने- "संविधानसभाको म्याद थप्न सकेको छैन।" NCS कर्मचारी डीबीएस (पहिले CRB) जाँच गरियो र युवा मान्छेसँग काम गर्ने उपयुक्त प्रशिक्षण छ।
सबै गतिविधिहरू व्यापक रूपमा जोखिम-मूल्याङ्कन गरिएका छन् र सावधानीपूर्वक चयन गरिएका प्रशिक्षित प्रशिक्षकहरू र निर्देशकहरूको निरीक्षण गरिन्छ र कार्यक्रम स्थानीय र राष्ट्रिय रूपमा आश्वासन प्रदान गरिएको छ।
के NCS मा भाग लिने मेरो किशोरहरुलाई अकादमिक अध्ययनको साथ हस्तक्षेप गर्ने?
नहीं। ग्रीष्म को बिदाहरु मा NCS ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम हुन्छ। हाम्रो छोटो शरद र वसन्त कार्यक्रमहरू शरद ऋतु वा वसन्त आधा अवधिको छुट्टै समयमा कुनै पनि समयमा लिन सकिन्छ।
ग्रीष्मको बिदामा NCS ग्रीष्म कार्यक्रम हुन्छ। हाम्रो छोटो शरद र वसन्त कार्यक्रमहरू शरद ऋतु वा वसन्त आधा अवधिको छुट्टै समयमा कुनै पनि समयमा लिन सकिन्छ।
तपाईंको किशोरले हाम्रो वेबसाइटमा साइनअप पृष्ठ प्रयोग गरेर वा 0114 2999 210 लाई बुलाएर वा हाम्रो NCS प्रबन्धकलाई ई-मेल गरेर, richard.r@element.li मा रिचर्ड गर्न को लागी भाग लिनको लागि उनीहरूको चासो रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ।
एक पटक दर्ता पूर्ण भएपछि, हामी तपाईलाई साइन अप गर्नुभएको विशेष प्रोजेक्ट बारे थप जानकारी पठाउनेछौं।